Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dhagax dhigay Dib u dayactir Dugsi sare | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dhagax dhigay Dib u dayactir Dugsi sare
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo dhagax dhigay Dib u dayactir Dugsi sare
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Max’ed ayaa Dhagax dhigay Dib u dayactirka dugsiga sare ee Max’uud Axmed Cali oo muddo 27 sano ah burbursanaa.
Guddoomiyaha gobolka oo ka hadlay munaasabadda dhagaxdhigga ayaa sheegay in maamulka cusub ee gobolka ay muhiimad wayn siinayaan xoojinta iyo horumarinta adeegyada bulshada sida waxbarashada, Caafimaadka iyo Waddooyinka.
“Haddii aan nahay Maamuka gobolaka waxaa naga go’an in aan ballarino fursadda da’yarta Soomaaliyeed ay ku heli karaan waxbarashada aasaasiga ah, dugsigaanna wuxuu dowr wayn ka qaadan doonaa hirgalinta hadafkaasi”.
Dugsigan oo loogu magac daray halgamaa Max’uud Axmed Cali oo ka mid ahaa Raggii dhidibada u taagay hannaanka waxbarashada Casriga ee Soomaaliya waxuuna ka mid yahay dugsiydii sare ee gobolka Banaadir ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, wuxuuna cabir ahaan ku fadhiyaa Masaafo aad u ballaaran.
Previous articleMadaxweynaha oo qaabiley ehelada AUN Tahliil Jimcaale Hubane
Next articleQoysas abaartu saameysay oo kaalmo la gaarsiiyay